AFG Pilatus PC 12 sano 2 3 bilood ka hor #1038
Ma jiraan wax qorshe ah oo lagu abuurayo AFG Pilatus PC 12 loogu talagalay FSX/ SE? Waxaan helay wax yar laakiin uma heli karo si ay ugu rakibaan FSX/ SE.
AFG Pilatus PC 12 sano 2 3 bilood ka hor #1039
Ma haysaa daabacaaddii sanduuqeed ee FSX? Mise Steam? Shabakadda simivation.com ayaa leh moodelkan oo waan ku rakibay gudaha FSX iyada oo aan wax dhibaato ah, Halkan waxaa ah mid ka imanaya tusaalooyinka flyaway
Mararka qaarkood soo-dejimahaan ayaa ku dari lahaa fayl dheeri ah oo sababi doona FSX Faylka diyaaradahu waa inaysan u aqrin faylka si sax ah. Si looga fogaado xaqiijinta in ay jirto hal fayl oo leh magaca diyaaradda saaran. Markaad faylka furto, waa inuu si toos ah u muujiyaa, qaabka, guddi, CFG iwm. .... Haddii ay tahay inaad furto laba fayl si aad u hesho macluumaadkan, FSX ma akhrin doono faylka. Waxaan rajeyneyaa inay tan kuu sharraxeyso.
Markaad faylka soo dejiso, intii aad gelin lahayd FSX Galka galka diyaaradaha .. U soo qaad desktop-ka. Saddex fayl ayaa soo bixi doona Waxay yihiin:
Tag faylka Fly Away file link.
Dhamaan dhamaantiis laakiin faylka PC-12X
Fur faylka PC-12X oo fayl kale ayaa u muuqda: AFGPC12X. Kani waa galka aad rabto inaad nuqul ka sameysato FSX / simobjects / galka diyaaradda. Midig ku dhaji faylka AFGPC12X oo xulo nuqul, ka dibna ku dheji faylka galka galka diyaaradda FSX... Waa inay fiicnaataa shaqada!
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray DRCW. Reason: Procedure for download of file
AFG Pilatus PC 12 sano 2 3 bilood ka hor #1040
Waad ku mahadsan tahay, Waxaan hayaa Daabacaadda Steam. Waxaan isku dayey labadaba flyaway, & siminno. ma heli karin midkood inuu shaqeeyo. Waan isku dayi doonaa taladaada. Nasiib ii nasiib.
AFG Pilatus PC 12 sano 2 3 bilood ka hor #1041
Mahadsanid . Taasi waxay ahayd Xaragada Magic ee aan raadinayay ..... Waan Shaqeynayay Great.Tank you :)
AFG Pilatus PC 12 sano 2 3 bilood ka hor #1042